Hosy ambongadiny volom-borona volom-borona vaovao miaraka amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy nify Antler | Icool
Hety barety fanamboarana bolo vaovao miaraka amin'ny nify antler
Modely ： IC-6023T
Size: 6,0 santimetatra, 23 nify
Endri-javatra: Hety manify volo
● Ny endrik'ity hety ity dia tsotra sy kanto, miaraka amina asa-tanana tsy manam-paharoa, ary voakapa tsy misy dian-tongotra ny nify. Ity karazana hety ity dia manana endrika tsotra sy asa-tanana miavaka. Ny nify lehibe sy maditra dia azo tapahina tsy misy soritra. 6 santimetatra, nify 23, ny tahan'ny fanesorana volo dia 20-25% eo ho eo.
● Ity karazana hety ity dia afaka miatrika mora ny fanesorana volo miverimberina ary miteraka vokatra tsy misy tohika. Malalaka kokoa ny fanapahana fisarihana, mety amin'ny fanodinana voadidy tsara. Mety amin'ny fanitsiana madinidinika ny volon-dehilahy sy ny taovolon'ny ankizilahy.
● Ny volo fohy an'ny lehilahy voapaika tsara dia azo ampiasaina fa tsy fisisatra na fanosehana herinaratra. Ny vokany mihena dia voajanahary sy malefaka, ary avo ny asany. Ny taovolo lava volo ho an'ny vehivavy dia mila fahatsapana haitao matanjaka, izay azo ampiasaina hanitsiana sy handefasana ny volo na ny tendrony. Azo ampiasaina alohan'ny perm ho an'ny volo lava, indrindra ho an'ny curl izay manana volo betsaka ary te ho malemy. Izy io dia afaka mamorona fahatsapana fangejana sy banga, izay afaka manatsara ny perm perm.
● Raha tsara tarehy volo ianao, na tianao fitaovana tsara kalitao, ity hety nify ity dia safidy tena tsara ho anao.
6.0 santimetatra, nify 23
Teo aloha: Hetezo manapaka tsara volo manify hety miaraka amin'ny visy diamondra manga
Manaraka: Gunting manety volo havia sy havanana